Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo u Dhoofay Turkiga
May 4, 2012 - jawaab	Number of View: 177Share
Muqdisho:- Waxaa goor dhow garoonka diyaaraha caalamiga ah ee Aadan Cadde ka duulay wafdi uu hogaaminayo duqa magaalada Muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir oo ku sii jeeda magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga.
Socdaalka wafdiga duqa Muqdisho ee dalka Turkiga uu ku tagayo ayaa yimid kadib casuumaad rasmi ah oo dowladda hoose ee XAMAR ay ka heshay dhigeeda magaalada ISTANBUUL.
Xubnaha socdaalka shaqo ee guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ku wehliyo ayaa waxaa ka mid ah ku xigeenkiisa dhanka maamulka iyo maaliyadda mudane Iimaan Nuur iikar, urban planner ka Muqdisho mudane Eng. Maxamed C/qaaadir Axmed Shaan, lataliayah duqa magaalada mudane Cali Gaabow iyo xunbno kale.
Ajandayaasha kulanka magaalada ISTANBUL ku dhexmari doona wafiga duqa magaalada Muqdisho iyo masuuliyiinta dowladda hoose ee Istanbul ayaa waxaa ugu waa weyn, sidii loo sii adkeyn lahaa xiriirka walaaltinimo ee Somalia iyo Turkiga iyo sidii Muqdisho ay Turkida ug a fulin lahayeen mashaariic horumarineed.